Avengers – Infinity War – Page 3 – Filimside.net
Avengers – Infinity War iyo ganacsiga uu gudaha Hindiya ka sameeyay mudo lix maalmood ah
Filimka weyn ee Hollywood-ka ah Avengers – Infinity War ayaa hoos u dhacii ugu horeeyay shalay sameeyay madaama maalin shaqo ahayd ayadoo maal mihii hore uu helaayay fasaxyo gaab gaaban. Avengers – Infinity War ayaa […]
Rasmi: Avengers – Infinity War iyo Talaadadiisa kowaad lacagaha uu gudaha Hindiya ka keenay
May 2, 2018 Zakarie Abdi
Filimka weyn ee Hollywood-ka ah Avengers – Infinity War ayaa ganacsi wacan sameeyay Talaadadiisa kowaad wuxuuna keenay 20 Crore (Trade Figure) asigoo ka faa’iideestay fasixii shalay ee maalinta shaqaalaha aduunka. Avengers – Infinity War mudo shan maalmood ah […]
Rasmi: Avengers – Infinity War iyo Isniintiisa kowaad gudaha Hindiya lacagaha uu ka keenay
May 1, 2018 Zakarie Abdi
Filimka Avengers – Infinity War ayaa sameeyay ganacsi aan horey loo arag Isniintiisa kowaad asigoo keenay 20 Crore ilaa 21 Crore lacago u dhaxeeyo sida shabakada Boxoffice India (BOI) subaxaan soo daabacday. Ganacsigii la qiyaasay Isniintiisa kowaad waxyar ayuu ka […]
Maqaal: BOI oo iftiimisay ceebta dhacday iyo Avengers – Infinity War qaybtiisa Af Hindiga lagu daawaday ganacsigiisa!
Filimka Avengers – Infinity War wax waali ah ayuu gudaha Hindiya ka sameenayaa waxaana horey idin kula wadaagnay in filimkaan mudo sedex maalmood ah 94 Crore (Trade Figure) gudaha Hindiya kasoo xareeyay asigoo noqday filimka 2018 ugu bilaabshada […]
April 30, 2018 Zakarie Abdi
Waxaaba la islahaa filimka Avengers – Infinity War Isniintiisa kowaad xoogaa ganacsi ahaan wuu yara gaabin doonaa laakiin Isniin taariikhi ah ayay u noqotay. Shabakada Boxoffice India (BOI) ayaa soo daabacday in filimka Avengers – Infinity War […]
Lama arag lama maqal: Avengers: Infinity War oo la wareegay rikoor walbo gudaha USA iyo suuqyada caalamka!
Filimka weyn Avengers: Infinity War ayaa dhigay rikoor ay adkaan doonto in dib looga sameeyo Hollywood-ka asigoo si rasmi ah u noqday filimka lacagaha ugu badan soo xareeyo mudo sedex maalmood dibad iyo dal. Avengers: Infinity […]
Maqaal BOI soo daabacday: Avengers – Infinity War ganacsigiisa maalinta kowaad cashar haka bartaan Bollywood-ka
Filimka weyn ee Hollywood-ka ah Avengers – Infinity War maalinta kowaad 30 Crore ganacsi ah ayuu gudaha Hindiya ka sameeyay waana ganacsi waali ah asigoo 6 Crore dheeraaday Baaghi 2 oo sanadkaan ugu bilaabasho wanaagsan. Shabakada […]
Rasmi: filimka Avengers – Infinity War oo maalintiisa labaad ganacsi weyn gudaha Hindiya ka sameeyay
Filimka Hollywood-ka ah Avengers – Infinity War ayaa si waali ah gudaha Hindiya ka sameenayo wuxuuna maalintiisa labaad ama sabti kowaad uu keenay 30 Crore ilaa 30.50 Crore sida shabakada BOI soo daabacday. Filimka Avengers – Infinity War mudo labo maalmood […]